प्रधानमन्त्री कायर भएर सूचना विधेयक आएको हो - नेता थापा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रधानमन्त्री कायर भएर सूचना विधेयक आएको हो – नेता थापा
काठमाडौं । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले बिहीबार विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै युवा नेता गगन थापाले काम गरेर मुख बन्द गर्ने आँट नभएपछि विधेयक ल्याएर तर्साउन खोजिएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्ने आँट नभएपछि जनताको मुख थुन्‍न सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको दाबी गरेका हुन् ।
“माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएछ- विधेयक नपढीकन आयो । यो विधेयकमा कहाँ छलफल गर्ने मन्त्रीजी ? सिंहदरबारमा गर्ने हो ? संसदमा गर्ने हो ? माइतीघरमा गर्ने हो कि तिम्रो कार्यालय धुम्बाराहीमा गर्ने हो ?,” मन्त्री बास्कोटालाई छलफलका लागि चुनौती दिँदै उनले भने, “प्रत्येक दफादफा-शब्दशब्दमा छलफल गर्न तयार छु । नपढीकन आएकोहोइन । पढेर बुझेर आएको हुँ । हेप्ने हाम्लाई नपढीकन आयो भन्ने ? हामीले बुझेर आएको हो । पढेर आएको हो ।”